China CNC Pipe Laser Cutting Machine miaraka amin'ny Fibre Laser loharano mpamokatra sy mpamatsy |UNIONLASER
Karazana: Tube fibre laser fanapahana milina
1. Max fanapahana halavan'ny 6m sy ny savaivony ny 220mm.
2. Fomba fiasa: Fibre Laser fanapahana.
3. Manapaka fizarana oblique amin'ny faran'ny sodina.
4. Fanapahana ho an'ny tarehy groove isan-karazany.
5. Manapaka amin'ny lavaka oval efamira eo amin'ny sodina efamira.
6. Manapaka sodina varingarina vy.
7. Manapaka sary manokana maromaro amin'ny fantsona ary tapaho ny fantsona.
halavan'ny fanapahana 6000* mm
Rafitra fanaraha-maso Cyptube fanapahana rafitra
ampahany azo atao Auto loading sy ny fampidinana rafitra ho an'ny fantsona
Noho ny hafainganam-pandeha avo sy malefaka fanapahana ny fibre tamin'ny laser fanapahana milina, maro be pitsiny sary azo karakaraina haingana tamin'ny laser fibre fanapahana rafitra sy ny fanapahana vokatra nahazo ny fankasitrahana ny orinasa haingon-trano.Rehefa nandidy famolavolana manokana ny mpanjifa, dia azo tapahina mivantana ireo fitaovana mifandraika aorian'ny nanaovana ny sary CAD, noho izany dia tsy misy olana amin'ny fanamboarana.
Ny ampahany metaly maro amin'ny fiara, toy ny varavaran'ny fiara, ny fantsom-pandehan'ny fiara, ny frein, sns., dia azo karakaraina amin'ny alàlan'ny milina fibre laser metaly.Raha ampitahaina amin'ny fomba fanapahana metaly nentim-paharazana toy ny fanapahana plasma, ny fanapahana tamin'ny laser fibre dia miantoka mazava tsara sy ny fahombiazan'ny asa, izay manatsara ny vokatra sy ny fiarovana ny ampahany amin'ny fiara.
3 Indostrian'ny dokam-barotra
Noho ny habetsahan'ny vokatra customization ao amin'ny indostrian'ny dokam-barotra, ny fomba fanodinana nentim-paharazana dia mazava ho azy fa tsy mahomby, ary ny fibre tamin'ny laser metaly cutter dia mety tsara ho an'ny orinasa.Na inona na inona karazana endrika, ny milina dia afaka mamokatra vokatra metaly notapatapahina tamin'ny laser avo lenta ho an'ny fampiasana dokam-barotra.
4 Indostria kojakoja
Amin'izao fotoana izao ny olona dia manana fangatahana ambony kokoa amin'ny famolavolana sy ny fampiharana ny kojakoja an-dakozia, ka ny vokatra mifandraika amin'ny lakozia dia manana tsena mampanantena eran'izao tontolo izao.Fibre tamin'ny laser fanapahana milina dia tena mety amin'ny fanapahana manify Stainless vy amin'ny hafainganam-pandeha haingana, mazava tsara, tsara vokany, ary malama fanapahana ambonin'ny, ary afaka mahatsapa namboarina sy manokana fampandrosoana ny vokatra.
5 Indostria jiro
Amin'izao fotoana izao, ny jiro ivelany mahazatra dia vita amin'ny fantsona metaly lehibe izay amboarina amin'ny karazana fanapahana samihafa.Ny fomba fanapahana nentim-paharazana dia tsy vitan'ny hoe manana fahombiazana ambany, fa tsy afaka manatratra ny serivisy fanamboarana manokana.Fibre tamin'ny laser takelaka metaly sy sodina cutter dia tsara ho toy ny tonga lafatra tamin'ny laser vahaolana izay mamaha ity olana ity.
6 Fikarakarana vy
Fibre tamin'ny laser fanapahana milina dia teraka ny fanodinana takelaka vy sy ny fantsona amin'ny maoderina fanodinana vy indostria izay ny marina sy ny vokatra dia miha ilaina.UnionLaser fibre tamin'ny laser fanapahana dia nampiseho azo antoka sy tena mahomby fanapahana fahombiazana araka ny mpanjifa'fanehoan-kevitra, azonao atao koa ny manamarina ity lahatsoratra ity raha te hahalala bebe kokoa momba ny endri-javatra sy ny tombony amin'ny laser fibre.
7 Fitaovana ara-batana
Ny fitaovam-panatanjahantena ho an'ny daholobe sy ny fitaovam-panatanjahantena an-trano dia nivoatra haingana tato anatin'ny taona vitsivitsy, ary lehibe tokoa ny fangatahana ho avy.Ny indostrian'ny famokarana fitaovana ara-batana dia niroborobo niaraka tamin'ny teknolojia fanapahana vy tamin'ny laser fibre.Fampahalalana bebe kokoa momba ny fanapahana tamin'ny laser fitaovana ara-batana, azafady vakio ity lahatsoratra mifandray ity mba hahazoana fanazavana bebe kokoa.
8 indostrian'ny fitaovana an-trano
Miaraka amin'ny fivoaran'ny teknolojia maoderina, ny teknolojia fanodinana nentim-paharazana amin'ny indostrian'ny fanamboarana kojakoja an-trano dia manohy manova sy manavao.Metal tamin'ny laser fanapahana milina dia iray amin'ireo fomba fanodinana mahery indrindra amin'ny indostria fanodinana metaly ankehitriny.Ao amin'ny dingan'ny famokarana fitaovana an-trano, na manatsara ny kalitaon'ny fanodinana na manatsara ny endriky ny vokatra, dia betsaka ny tokony hatao amin'ny fibre laser cutter.
teo aloha: metaly fibre tamin'ny laser fanapahana milina
Manaraka: CNC fantsona sy takelaka Laser Cutting Machine